#1 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
သတင်းအချက်အလက်တွေဟာလူအများ (သို့) မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ရရှိတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းမမှန်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ပါတယ်၊ ဒါဟာမကောင်းတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုနားလည်နိုင်ရန် လေ့လာတတ်မြောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ အရင်းအမြစ်သုတေသနဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းမြစ်များများရလေ၊ သင်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်ရရှိလေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်ရဲ့ Supervisor က သင့်အား ‘ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိသောသူ’ အဖြစ်မှတ်ယူပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေကို အလဟဿမဖြစ်အောင် အမြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးဟာ အလုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာသေချာပေါက် သင့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့အင်အားအသုံးပြုပြီးကြိုးစားချင်မှာပါပဲ။ သို့သော်လည်းအလုပ်တိုင်းနဲ့အဆင်ပြေပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ သင့်ထက်ပိုပြီးတစ်ခုခုမှာ သာလွန်နေတဲ့သူတစ်ဦးဦးရဲ့အကူအညီကိုလိုပါလိမ့်မယ်။ သင်ရဲ့ Client (သို့မဟုတ်) Customer များဟာ သင်စာရွက်စာတမ်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုဂရုမစိုက်လောက်ပေမယ့်လည်း သင်အကြံပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဘယ်လောက်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဂရုစိုက်တတ်ပါတယ်။
[Email (သို့) Phone ဖြင့်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ပါ]
Email ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အတွက်အစွမ်းထက်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီး တိုင်ရိုက်ဆက်သွယ်စကားပြောမှသာ Email ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဆက်သွယ်မှုကို ပြန်လည်အစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်သားထားရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ Email ပို့ခြင်းမဟုတ်ပဲ လိုအပ်သည်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိပြီး Career Development အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင် သင်ဘယ်လိုစာဖတ်လေ့ရှိသလဲ?
တချို့က စာကိုမြန်မြန်ဖတ်ခြင်းက အချိန်တိုအတွင်းမှာစာအုပ်တွေအများကြီးကို ဖတ်ပြီးစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင်ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကနေ သင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ ဘယ်လောက်သင်ယူခဲ့သလဲဆိုတာစဉ်းစားဖူးပါသလား?
စာဖတ်တယ်ဆိုတာဟာ စာရေးသူနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများလိုပဲ ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံမစိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ စာရေးသူဘာပြောချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ထိုစာအုပ်ထဲမှအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကပဲ သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။